Ny fomba rehetra tsy hiverenan-d Ravalomanana Marc eto Madagasikara
2009-08-12 @ 21:40 in Ankapobeny
Niforona ary mihetsika ny hery iray antsoina hoe herin'ny fanovana eto Madagasikara. Ny antony nananganana ity hery ity dia hanampy sy handrisika ankolaka raha azo atao ny hery miaramila handray ny andraikiny manoloana izao filazana ny mety hiverenan-dRavalomanana eto Madagasikara izao. Marina fa tsy voatery hoe izao dieny izao izany fodiana izany saingy tsy eken'ny sainy velively na dia ny mieritreritra izany aza. Ilaina dia ilaina ny fampihavanam-pirenena, saingy raha ny filoha teo aloha Ravalomanana kosa tena tsy zakany!
Misy tokoa ny vondron'olona, maniry dia maniry, ary nisy aza ny efa nahaloa-bava tsy nahy, ny idiran'ny miaramila an-tsehatra hanakanana an'izany fiverenan-dRavalomanana izany. Tena olana goavana manko ilay rangahy io: tsy vitan'ny hoe nanaporofo izy fa mahavita zavatra hay ity Malagasy ity rehefa hampandroso ny fireneny tokoa fa niezaka ihany koa izy ny hametraka izany antsoina hoe fifampifehezana... diso aho: jadona eto Madagasikara. Tsy mahazaka fehezina... tsia, jadona no tiako lazaina... manko ny olona amin'ny ankapobeny fa mahafinaritra ny maso ery ny mahita ireo mpivarotra amoron-dalana mirotsaka tsikelikely anaty lalana, sy ny itakian'ny hafa ny hamerenena indray ny tsena eny Analakely, sitrany ahay mivandravandra sy mihanaka hatrany Analakely ny savoritaka eny Behoririka sy Ambodifilao... Tsy izay no tiako lazaina fa mba tsy mivilivily ny mpividy fa manaraka ny arabe dia mahita izay hovidiana.
Ny olana hafa ihany koa amin'izay mety hiverenan-dRavalomanana eto Madagasikara ka mety hirotsahany hofidiana indray, dia ny fanahiana fandrao ekeny eo ny fangatahan'ny mpanohana azy hanafoanana izany miaramila izany. Tena tsy ekeny mihitsy izany satria ahoana indray moa ny fomba hanonganana raha sanatria tafaverina eo amin'ny fitondrana izy raha foanana ny miaramila? Efa hita ihany manko fa be mpanaraka ihany ity filoha teo aloha ity ary mety ho lany mihitsy aza ka aleo sakanana tsy hiditra eto Madagasikara mihitsy.
Eo ampieritreretana izany aho dia niitatra ny saiko ka lasa nirediredy : Tokony hirotsaka an-dalambe indray ny mpitolona tamin'ireny telovolana voalohany ireny hanaporofoana amin'ireo milaza ny tenan'izy ireo ho mpanaraka ny ara-dalàna fa mbola ry zareo hatrany no mitana ny maro an'isa ka mahasolo tena ny vahoaka. Fantatra anefa fa tsy homen'ireo mpanohana ny ara-dalàna ireo mihitsy ny kianjan'ny Magro hanaovana fihetsiketsehana ka dia eny amin'ny kianjan'Ambohijatovo na eny amin'ny kianjan'ny 13 mey mihitsy no hanaovana izany fihetsiketsehana izany. Antsoina indray ny eny ambany tanàna hiara-dia amin'ny herin'ny fanovana tarihin'ny pasitora retirety Andriamanjato Richard ka ny tambin'ny fandraisana anjara dia araka ilay nahazatra hatrany rehefa mirava kelikely ny fivoriana. Eo ihany koa ny fanangonan-tsonia hitsipahana ity fifanarahana tany Maputo ity. Raha hita fa mitady ho tsikaritra fa vitsy sisa ny mpanaraka sivily dia hetsehina indray ny hery miaramila izay nahavita asa be voninahitra ho an'ny tanindrazana tamin'ny nanavotana an'i Madagasikara hiala teo ambany ziogan'ny fampandrosoana an'i Madagasikara...tsia, jadona... sady ny ohabolana malagasy rahateo efa nilaza fa izay basy no be, izany hoe izay manambasy no porofo fa maro an'isa eto Madagasikara. Mino aho fa tsy misy diso hevitro tao anatin'izay eritreritra sendra nandalo izay.
jentilisa, 12 aogositra 2009